Faritr’i Sofia Ny distrikan’i Mampikony no tena tsy mandry fahalemana
Marina tokoa fa toy ny mirongatra ny tsy fandriampahalemana any amina distrika sasantsasany ao amin’ny faritr’i Sofia, hoy ny sekretera jeneralin’ny governora, Tolojanahary Maharavo, raha namarana ny iraka nataony teto Antananarivo omaly.
Distrikan’Ambohimahasoa 8 taona ny zaza dia efa mamaky trano
Tsenan’Asabotsy ny sabotsy teo no nahatrarana ramatoa nividy zavatra tamina vola sandoka 5000 ariary, raha ny fampitam-baovao avy amin’ny CSP Ambohimahasoa.
Ambatomaro Tratra ambodiomby ilay mpangalatra akoho
Nanararaotra ny fahanginana sy ny andro alahady teny Ambatomaro, Boriborintany fahadimy ilay tovolahy saingy tra-tehaka tamin’ny halatra akoho nataony. Nisy namana fa izy no voasambotra, omaly atoandro.
Tetezan-dramala Isotry Tratra teo am-panendahana izy roalahy
Lehilahy miisa roa no voasambotry ny Polisy miasa ao amin'ny kaomisaria Isotry nanao fanamiana sivily omaly Alahady teny an-toerana ihany.
fokontany sy kaominina Ivahona, ao amin’ny distrikan’i Betroka ankehitriny, hivoahan’ny marina momba ity raharaha miteraka resabe ity.
Nanambara ny solontenam-pokonolona nitondra ny fitarainana fa : « tsy misy fantatry ry zareo ny anton’ny hetsika nataon’ny zandary tany an-tanànany satria dia niara-niasa hatrany tamn’ny mpitandro ny filaminana izy ireo. Lavinay mponina tanteraka ny filazana ofisialy navoakan’ny zandary fa tanànan’ny dahalo i Soahazo, hoy izy, sy nandraofana omby halatra 400 isa. Voafitaky ny tena dahalo izay nanafika anay ny zandary, hoy ny fanampim-panazavana azo. Ireo olona nitarika ny zandary handripaka ny vahoakan’i Soahazo ihany no namono ny komandin’ny kaompanian’ny zandary tao Betroka niaro ny tanàna tamin’ny taona 2015.
Tsiahivina fa tonga vao maraim-be tao Soahazo ny zandary ny 28 jona teo ary tsy niresaka fa nanao tifi-davitra avy hatrany, nandoro trano efatra tao an-tanàna ary nitifitra ny ray aman-dreny saika hanontany ny anton’io hetsika io. Rava fananana tanteraka ny mponina satria may avokoa ny tahirim-bary nandritra ny taona ankoatra ny vola ary ireo omby 400 nalain’ireo sivily niara-dia tamin’izy ireo tao am-bala. May ihany koa ny bokin’ireo omby nentin’ny zandary ireo. Nandositra ny vatan-dehilahy mba tsy hifanoherana amin’ny fanjakana, nisy ny nofatorana izay tratra tao an-tanàna ary nisy notifirina ihany koa.